I-Semalt ichaza indlela yokukhusela amanye amazwe ukusuka kwi-Site yakho
Ukuba unayo iwebhusayithi okanye iblogi, kufuneka uqhelane nelokuba lifikeleleke kuwo onke amazwe ngokungafi. Iziza ezahlukileyo azibandakanyekanga kubantu bakwamanye amazwe, ngoko asifanele silindele ukuhamba kunye nokutyelela kwabo. Ngokomzekelo, ukuba unayo i-bookshop yendawo kwaye i-market yakho ngabantu belizwe lakini, akufuneki ukuvumela amanye amazwe ukuba atshabalalise umgca womgca we-server yakho.
Kukho izizathu ezahlukahlukeneyo zokuba ukuvimbela ukufikelela kumazwe athile kuyimfuneko. Isizathu esona sizathu kukuba indawo yakho iya kubamba kuphela abantu basekuhlaleni kwaye ayinanto enxulumene nabangaphandle, ngoko unokumisa iGoogle, iBing, kunye ne-Yahoo ukususela kwi-site yakho kweso sizwe - ladies winter dress hats. Nantsi, uRoss Barber, Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uxoxe ngeendlela eziqhelekileyo zokuvimba amazwe:
1. Ifayile .htaccess
Ukuba ungumntu wewebhu, unokwazi ukuba ukuhlela ifayile .htaccess inokuzuza inkundla yakho ngeendlela ezininzi. Abahlaseli bamagqabi kunye nabagaxekile basebenzise iiproxi kunye neefama zeefama ukwenza imisebenzi yabo. I-webmaster, nangona kunjalo, inokuvimbela idilesi ze-IP ezinokukrokra ukwenzela ukuba abahlaseli bangakwazi ukwenza izinto ezingekho phantsi kwe-intanethi. Ifayile yakho .htaccess iyakhula ibe ngamawaka emigca yesicatshulwa xa uvimba amazwe angafunekiyo. Kule nto, kufuneka nje ufake ikhowudi ethile kwifayile ye -htaccess, kwaye ikhowudi yile:
I-odityanisiweyo Yenyani, Vumela
Dinyuka kwi 1.1.1.1
Denyuka kwi 3.3.3.3
2. Sebenzisa inkampani yokubamba ngeenkonzo zokukhusela
Unokusebenzisa isevisi yokubamba inikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo zokukhusela ilizwe. I-GoDaddy yile nkampani yenyamba kuphela eyenzela le nkonzo ngexabiso elifanelekileyo ngenyanga.
3. Ubunzima bezithuthi
Intsimbi engenanto, ebizwa ngokuba yiVPS, ngumatshini onokuwusebenzisa ukuvimba amazwe angafunekiyo. Ukusuka kwi-firewall yesofthiwe kwi-hosting service kunye nepaneli yokulawula, insimbi engenanto izisa konke ezandleni zakho. Izintathu ezikhethileyo ezikhethiweyo onokuzenza nazo ziyi-DigitalOcean Droplet, Rackspace, kunye ne-InMotionHosting. Google amagama abo kwaye khangela iinkcukacha.
4. Sebenzisa ii-blockers IP yakho ye-IP
Inkampani yokubamba oyisebenzisayo ingakunceda ukuba uvimbele iidilesi ze-IP ngokusebenzisa ipaneli yokulawula. Ungaqhagamshelana nabo ngokuthe ngqo kwaye ubacele ukuba bafake i-IP blocker kwiCPanel yakho ukuze ukwazi ukuvimba ii-IP zamazwe ongafuni ukufumana i-traffic ukusuka.
5. Ukukhutshwa kweGeoblocking okanye iGeo Restriction
I-Geo Restriction isenza sikhethe amazwe esifuna ukuwuthintela ukufikelela kuwo. Ngokuqwalasela i-whitelist okanye uluhlu lwabantu abamnyama balawo mazwe, unokulawula lula ukuhanjiswa kwewebhu yakho nge-Amazon CloudFront. Akamai enye inketho yokuhamba nayo. Ukuba unayo i-CDN ukuhambisa umxholo wakho wewebhu, kufuneka ukhathazeke ngokusetyenziswa okungenanto okungabonakaliyo kwebhanwidth yakho. Qaphela iinkonzo ze-Geoblocking kwaye wenze izinto zenziwe ngokugqibeleleyo.
6. Iifomula zeApache
Ukuba unayo iimodyuli ze-Apache, awuyi kudingwa ukuzalisa iifayile .htaccess ngeendlela ezininzi ze-IPs. U-MaxMind usinika i-database ekhululekile esinokuyisebenzisa ukukhusela ii-IP ezingafunekiyo okanye ezikrokrelayo. I-GeoLite2 yayo yindlela efanelekileyo yokuhamba nayo kwaye ayikho indleko.